जान्नुहोस् ! यस्ता छन् पूजा गर्नुअघि पालना गर्नुपर्ने नियमहरु
जनवरी 1, 2019 जनवरी 1, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments नियम, पूजा
पूजा देवीदेवतालाई प्रशन्न पार्न श्रद्धा भक्‍तिपूर्वक गरिने कार्य हो । हरेक देवता र उनीहरुप्रति आस्थावान मानिसले आफ्नो परम्परा अनुसारको विधि अपनाइ शुद्ध मन र शरिरले आफ्नो आस्था देखाउनु नै पूजा हो । यदि तपाई प्रतिदिन घर वा मन्दिरमा पूजा वा प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने तपाईले केही नियमहरु पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । नियम भए धर्म हुन्छ र धर्म भए जीवन हुन्छ । अतः नियमानुसार नै कुनै पनि कार्य गर्नुभयो भने उचित हुन्छ । त्यसोभए पूजाभन्दा पहिला हामीले गर्नुपर्ने कार्य के हो जो जरुरी हुन्छ ? यो लेखमा पूजा भन्दा पहिले गर्नुपर्ने कार्यबारे उल्लेख गरिएको छ ।
उपरोक्त करिकाबाट स्नान गर्न सकिने अवस्था छैन भने सामान्य तरिकाले स्नान गर्ने बेला तपाईले आफ्ना सबै १० छिद्रलाई राम्रोसँग सफा गर्नुपर्ने हुन्छ । १० छिद्रमा आँखा र कानका २ दुई छिद्र, कानका २ छिद्र, मुख, नाभि (नाइटो) र गुप्ताङ्ग लिाएर कूल १० छिद्र हुन्छन् ।
तपाईले सन्ध्यावन्दन, पूजा या आरती गर्ने बेला शरीरमा एउटै कपडा लगानुहोस् । त्यो हो सिलाइ नगरिएको शुद्ध सेतो कपडा । किनकि प्राचिनकालदेखि चलेको नियम यही हो । हिन्दु धर्ममा कुनै पनि प्रकारको पूजा–अर्चनाको बेला श्रद्धालुलाई धोती लगाउन अनिवार्य गरिएको छ । प्राचीनकालमा धोती नलगाएर गरिने पूजा–अर्चनालाई पुर्ण मानिदैन थियो ।
* तर आजको बैज्ञानिक युगमा धोतीको सट्टा सफा कपडा लगाएर पूजा गर्न सकिन्छ ।
४. शुद्धि र आचमन
मन्दिरमा प्रवेश गर्नु अगाडि पुनः एकपटक शुद्धि गरिन्छ । शौचादिबाट निवृत्ति भएपछि पूजा, प्रार्थना गर्नुपूर्व आचमन गरिन्छ । मन्दिरमा गएर पनि सबैभन्दा पहिले आचमन गरिन्छ । सन्ध्यावन्दन के बेला आचमन, प्राणायामादि गरेर गायत्री मन्त्रले निराकार ईश्वरको प्रार्थना गरिन्छ । त्यसैले पूजा गर्नु पहिले शुद्धि र आचमन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
शिवजीलाई प्रसन्न गराउन भक्तहरूले जान्नुपर्ने उपायहरू
← गायत्री मन्त्र जप्दा स्वास्थ्यमा हुने फाइदाहरु
जाडोमा अकबरे खुर्सानी खानुका फाइदाहरु →
नोभेम्बर 3, 2016 साइन्स इन्फोटेक 2